Friday December 12, 2014 - 08:44:19 in Wararka by
Mustaf Sheihk Cali Dhuxulow oo ka mid ahaa wasiiradii Xukuumadii C/weli Sheikh ee Baarlamaanku kalsoonida kala noqday sabtiddi bishu aheyd 6-12-2014, ayaa qaar ka mid ah Saxafiyiinta & dad siyaabo kala duwan u caawiway ka xumaaday wasiirkaasi oo
Dad badan ayaa si weyn ugu soo horjeestay kalsooni kala noqoshada Xukuumada, taasoo laga dareemay Magaalada oo dhan hadal haynteedda laga hayay meel kasto, iyadoo Afartii qof ee meel taaganba mid ka mid ah uu la dhacsaneyn Tillaabada ay Baarlamaanku qaadeen.
Dadweynaha ayaa ku sababeeyay Dhicida Xukuumadda in dib u dhac ku iman karo Hanaanka 2016, (NEW DEAL) .
Hadaba Mustafe Sheikh Ali Dhuxulow oo ka mid ahaa Gollaha Wsiirada Xukuumadaasi islamarkaana u qaabilsanaa Dhanka Warfaafinta & hanuuninta Bulshada ayaa wasiirkaasi ka mid ahaa wasiir ka wada dhaxeeyay Bulshada oo dhan isla markaana wax wayn oo la taaban karo qabtay.
Mustaf Dhuxulow waxaa uu ahaa mudane aad u jecel bulshada oo dhan waxaana lagu xusuustaa bishii Maarso ee sanadkan isagpo aan wax illaalo ah wadan uu Baararka Muqdisho la shaaheynayay Shacabka Soomaaliyeed.
Mustaf Dhuxulow ayaa waxa uu isbadal wayn ku sameeyay Wasaarada Warfaafinta isagoo sameeyay barnaamij Todobaadle ah oo looga hadlayay Wax qabadka Xuukamada Sabti walbo, sidoo kale Mustaf Dhuxulow ayaa Saxafiyiinta dhaawacma ku booqan jiray Isbitaalada isagoo gar gaar u fidin jiray had & jeer.
Mustaf Dhuxulow Bishii Juun Waxaa uu soo qaban qaabiyay Munaasabad lagu qabtay Magaalada Muqdisho Munasabadaas oo aheyd Bandhig Dhaqameedka Soomalida waxaana ka soo qeybgalay Madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamud & Marti sharaf aad u fara badan oo si wayn ulla dhacay barnaamijkaasi.
Qorshaha Barnaamijkaasi ayaa ahaa hidaha iyo dhaqanka waxaa uu ujeedadiisa ahayd in la soo nooleeyo astaantii muujinaysay dhaqanka Soomaalida iyo in bulshada loo abuuro waxyaabo xusuus geliya isla markaana nabada dhiirigelin u aheyd.
Monday, July 28th, 2014 Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow oo ahayd maalintii koowaad ee Ciida waxaa uu sameeyay dhawr Barnaamij oo Wasiirku kula wadaagayay xaaladooda dadka ku dhibaataysan Magaalada Muqdisho sida barakacayaasha, Dadka Naafada ah ee indhoolayaasha iyo Labo cunug oo isku dhegnaa.
Wasiirka Warfaafinta ayaa Sameeyay Iddaacad ku hadasha codka ciidanka taasi oo dhiiro galin u ah Ciidanka Xooga Dalka.
Mustafe Dhuxulow ayaa soo qabtay Howlo muhiim ah oo bulshada wax tar u leh siiba dadka aadka u liita.
Wax qoraal lagu soo koobi karo ma ahan waxqabadkii Mustafe Dhuxulow, Taariiqduse way xuseysaa Qofki wax u galla Shacabka.
Waxaa dhega dhegaynayay Maalmahan qaar ka mid ah Dadkii uu wax soo taray oo intoodda badan u badnaa dad aaad u liita ama kuwo naafo ah, kuwaas oo inta badan aad ugu shalaynayay in Xukuumada kalsoonida lagala laabtay Wasiir Mustaf awgiisa.